भुवन, केसी र जियाको कस्तो अनौठो प्रेम कहानी ६० वर्षको, उमेरमा पनि उतिकै रोमान्टिक!!! omg,… – News Nepali Dainik
भुवन, केसी र जियाको कस्तो अनौठो प्रेम कहानी ६० वर्षको, उमेरमा पनि उतिकै रोमान्टिक!!! omg,…
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १६, २०७७ समय: २०:०१:१५
***उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् ।
केसी चलचित्रका सर्वा्धिक सफल कलाकारसमेत हुन् । उनी अभिनयमा पनि सफल छन् । उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने असफल मानिन्छन् । अनमोल, विवेक र काजलका बुबा भुवनले जियालाई पारिवारिक रूपमा एकदमै नजिक बनाइसकेका छन् । दुई पटक श्रीमतीलाई रिझाउन नसकेका भुवनले अहिले जियालाई भने विवाह नै नगरी श्रीमतीजस्तै बनाएर मात्र किन राखेका होलान् ? भन्ने प्रश्नको रहस्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ।
*#*#भुवन दोस्रो विवाह पनि सफल नभएर एक्लिएको बेलामा जियाले भुवनलाई साथ दिएकी थिइन् । सन् २०१४ देखि भुवन र जिया दुइ जनासंगै बस्न थालेका छन् । जिया भुवनकै घरमा बस्छिन् । उमेरले ६० वर्ष पुगिसकेका भुवन अहिले पनि उत्तिकै आकर्षक छन् र युवतीका कारण चर्चामा आएका छन् ।
****उनीहरुले विवाह गरेको छैन भनेका छन् तर परिवारले भने जियालाई भुवनको जोडी भनेर स्वीकार गरेको बताइएको छ ।
****नायक भुवनको ब्यक्तिगत र सार्वजनिक जिवन निकै विवादास्पद छ । उनको दुई पटकको विवाह सफल भएन । उनी छोरासंग बस्दै आएका छन् । उनका दुवै श्रीमतीले सम्बन्ध विच्छेद गरेर अमेरिकामा छन । एक पछि अर्को श्रीमतीले साथ छोडेपछि अहिले उनी जिया केसीसंग साथमा छन् । उनले सार्वजनिक रुपमा जियालाई आफ्नो साथी भनेर सम्बोधन गर्छन । उनले जियासंग आफु निकै खुसी भएको पनि बताउँछन् ।
****बिश्वस्त सूत्रहरुका अनुसार भूवन केसी र जीया केसी लामो समयदेखि ‘लिभिङ टूगेदर’मा छन् । भुवनको घरमा जीया केसीलाई धेरै पटक देखेको केही चलचित्रकर्मी बताउँछन् ।
*****भुवनसँग निकट भएपछि जीया अहिले चलचित्र क्षेत्रमा सक्रिय छैनन् । तर, एक्ला भूवन केसीलाई जीयाले उनकै घरमा बसेर साथ दिइरहेकी छिन् ।
(को हुन् जिया ?)
Last Updated on: January 29th, 2021 at 8:01 pm
१०४९ पटक हेरिएको